स्मार्टफोनमा प्रोसेसरको काम के हो ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
स्मार्टफोनमा प्रोसेसरको काम के हो ?
काठमाडाैं । प्रोसेसर तपाईंको स्मार्टफोनको एउटा महत्वपूर्ण पूर्जा हो । आज हामी तपाईंलाई स्मार्टफोनको प्रोसेसर के हो र यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा विस्तृत रुपमा बताउँदै छौं ।
सरल रूपमा यसरी बुझ्नुहोस् ‘मालवेयर’ र यसबाट बच्ने तरिका
काठमाडाैं । बढ्दाे इन्टरनेट र डिजिटल प्रयाेगसँगै साइबर अपराधका विभिन्न माध्यम देखापर्न थालेका छन् ।
‘फार्मिङ’ आक्रमण के हो र कसरी सुरक्षित रहने ?
काठमाडाैं । पछिल्लो समय साइबर आक्रमणका विभिन्न घटना भइरहेका छन् । विभिन्न माध्यममार्फत हुने यस्ता
प्रयोगकर्तालाई एकपछि अर्को चुनौती, फिशिङसँगै अब भिशिङबाट समेत जोगिनुपर्ने
काठमाडाैं । ‘भ्वाइस प्लस फिशिङ’ अर्थात भिशिङ एउटा भ्वाइस अथवा भीओआईपी (VoIP) मा आधारित फिशिङ आक्रमण हो ।
मसिन लर्निङ र डिप लर्निङमा नझुक्किनुहोस्, यस्तो छ फरक
आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सको दुनियाँमा एकदमै धेरै चलेको शब्द हो, डिप लर्निङ र मसिन लर्निङ । तर